एमालेकाे १०औं महाधिवेशन गर्न बादलको नेतृत्वमा मूल व्यवस्थापन कमिटी, को-को छन् सदस्य ? « Nepal Bahas
एमालेकाे १०औं महाधिवेशन गर्न बादलको नेतृत्वमा मूल व्यवस्थापन कमिटी, को-को छन् सदस्य ?
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार २१:५३
४ कार्तिक, काठमाडौं । चितवनमा १०औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएको छ । प्रथम विधान महाधिवेशनमा बुटवल प्रस्ताव गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार च्यासलमा स्थायी कमिटी बैठक राखेर चितवनमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराएका छन् ।
पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी भन्दै केपी ओली प्रवृत्ति परास्त गर्नुपर्ने तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘माओवादी सकियो, एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत छैन’ भनेर राजनीतिक जुहारी चलिरहेका बेला एमालेले प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र भएको चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै महाधिवेशनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पूर्वमाओवादी नेता र हाल एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बादललाई दिएको छ ।
बादलको नेतृत्वमा एमालेले २१ सदस्यीय १०औं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । जसमा योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, काशीनाथ अधिकारी, विष्णु रिमाल, डा. राजन भट्टराई, देवी ज्ञवाली, विनोद श्रेष्ठ, सीता पौडेल, आनन्द पोखरेल, कपिल पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वती रावल सदस्य छन् ।
त्यसैगरी सातवटै प्रदेशबाट एक-एक जना प्रतिनिधि र सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट एक जना प्रतिनिधि रहने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बैठकले प्रथम विधान महाधिवेशनको समीक्षा गर्दै सफल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘महाधिवेशनबाट विचार र नीतिमा सर्वसम्मति कायम भएको छ । पार्टीमा भावनात्मक एकता र ठूलो सन्देश दिएको छ । नयाँ उर्जा प्रदान गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने ।
बैठकले अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुस्ख व्यक्त गरेको छ । मर्कामा परेका किसानहरुलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । घरबार गुमाएका लागि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको माग गरेको छ । मौसम पूर्वानुमान प्रभावकारी र यसको जानकारी किसानसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
राहत र उद्धारमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर खटिन जनप्रतिनिधिलाई आह्वान पनि गरेको छ । बैठकले सामाजिक संस्थामा सरकारले नांगो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । रेडक्रस र एनआरएनमाथि नांगो राजनीतिकरणप्रति निन्दा गर्दै यस्ता प्रकारका गतिविधि बन्द गर्नसमेत बैठकले माग गरेको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले बैठक भोलि दिउँसो २ बजे फेरि बस्ने बताए ।